အလုပ် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / အလုပ်
1:4 And his sons went and madeafeast by houses, each one on his day. ထိုအပေးပို့ခြင်း, they called their three sisters to eat and drink with them.
1:5 And when the days of their feasting had been completed, Job sent to them and sanctified them, နှင့်, getting up at dawn, he offered holocausts for each one. ဟုသူကပြောသည်များအတွက်, “Perhaps my sons have sinned and have not praised God in their hearts.” So Job did all the days.
1:6 သို့သော်အချို့သောနေ့၌, ဘုရားသခင်၏သားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌တက်ရောက်ရန်လာသောအခါ, စာတန်သည်လည်းသူတို့အကြားရောက်ရှိလာ.
1:7 သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုပြောပါတယ်, "သင်ဘယ်ကလာသလဲ?"ဖြေဆိုခြင်း, ဟုသူကပြောသည်, "ငါသည်ထိုပြည်၌လှည့်ပတ်ကြပြီ, ထိုသို့ခန့်သွားလာ၏။ "
1:8 ထိုအခါသခင်အားဆို၏, "သင်ငါ့ကျွန်စဉ်းစားမရဖူး, အလုပ်? သူ့လိုအဘယ်သူမျှမပြည်၌ရှိသည်, ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ရိုးသားသောလူကို, ဘုရားသခငျသညျကွောကျရှံ့သောဒုစရိုက်မှဆုတ်ခွာ။ "
1:9 သူ့ကိုဖြေဆိုခြင်း, စာတနျသကပြောပါတယ်, "ယောဘမျှရည်ရွယ်ချက်မှဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့?
1:10 သငျသညျသူ့ကိုခိုင်ခံ့သောကြပြီမဟုတ်, အဖြစ်ကောင်းစွာမိမိအိမ်သူအိမ်သားများနှင့်သူ့ကိုပတ်ပတ်လည်ကသူ့ပစ္စည်းတွေကို၏အသီးအသီးအဖြစ်, မိမိလက်၏အကျင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, နှင့်သူ၏အပိုင်ပွညျ၌တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်?
1:11 သို့သော်သင်၏လက်ကိုအနည်းငယ်တိုးချဲ့, သူကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအားလုံးမထိ, သူဆဲသင်၏မျက်နှာမှသငျသညျခြီးမှမျးလျှင်ကြည့်ရှုပါ။ "
1:12 ထို့ကြောင့်, သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုစာတန်ကပြောပါတယ်, "အကယ်, သူသည်သင့်လက်၌ရှိ၏သိရသည်အရာအားလုံးကို, ။ သူ့ကိုဆန့်ကျင်သင်၏လက်ကိုတိုးချဲ့ "ထိုအခါစာတန်သည်ထာဝရဘုရား၏မျက်နှာကိုမှမသှားဘူးသာ.
1:13 ဒါကြောင့်, တယောကျနေ့တှငျ, သူနှငျ့သူ၏သားသမီးတို့အစာစားခြင်းနှင့်စပျစ်ရည်ကိုသောက်လျက်နေကြစဉ်, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဖွားအစ်ကို၏အိမျ၌,
1:14 ယောဘထံသို့တမန်တို့သည် လာ., အဘယ်သူသည်ဟုဆိုသည်, "နွားလယ်ထွန်ခဲ့ကြ, နှင့်မြည်းသူတို့အနားမှာစားကျက်ခဲ့ကြ,
1:15 နှင့်သေသောက်ကြူးတို့လည်းရှိဟုန်တည်းပြေးနှင့်အရာခပ်သိမ်းသိမ်းသွား, သူတို့သည်ထားနှင့်ကျွန်တို့လုပ်ကြံ; ငါတယောက်တည်းသင်ပြောပြရန်သူတို့ကိုလွတ်ကင်းရန်တိမ်းရှောင်။ "
1:16 ထိုမင်းသည်နေဆဲစကားပြောနေစဉ်, ရောက်ရှိလာအခြား, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ဘုရားသခငျ၏မီးသည်ကောင်းကင်မှကျ, နှင့်, သိုးနဲ့ကျွန်တို့လုပ်ကြံပြီးမှ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမဖျက်ဆီး; ငါတယောက်တည်းသင်ပြောပြရန်လွတ်ပြေး၏။ "
1:17 ထိုမင်းသည်လည်းဆဲစကားပြောနေစဉ်, ရောက်ရှိလာအခြား, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ခါလဒဲအမျိုးသားသုံးတိုက်ခိုက်မှုစီစဉ်, နှင့်ကုလားအုပ်ပေါ်ချီတက်သူတို့နှင့်ယူ; နှင့်မသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုထားနှင့်ကျွန်တို့လုပ်ကြံကြပြီ; တပါးတည်းသာသင်တို့ကိုငါပြောပြရန်ပြေးကြ၏။ "
1:18 သူကဆဲစကားပြောခဲ့, အကယ်စင်စစ်, အခြား Enter, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "သင်၏သားသမီးတို့ကိုစားသောက်နှင့်၎င်းတို့၏ပထမဦးဆုံးဖွားအစ်ကို၏အိမျ၌စပျစ်ရည်ကိုသောက်လျက်နေကြ,
1:19 ရုတ်တရက်ပြင်းထန်သောလေတိုက်သဲကန္တာရတစ်ဒေသကနေထွက်ပြေးနဲ့အိမ်၏လေးထောင့်ခါရသောအခါ, သင်တို့၏သားသမီးပြိုကျကြေမွသော, သူတို့သည်သေ; ငါတယောက်တည်းသင်ပြောပြရန်လွတ်ပြေး၏။ "
1:20 ထိုအခါယောဘသည်ထသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်, နှင့်, သူ၏ဦးခေါင်းကိုရိတ်ပြီးမှ, သူသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ပြိုကျ, ကိုးကွယ်,
1:21 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "အဝတ်အချည်းစည်းငါသည်ငါ့မိခင်ရဲ့အမိဝမ်းထဲကထှကျသှား, နှင့်အဝတ်အချည်းစည်းငါပြန်လာကြလိမ့်မည်. သခင်ဘုရားကိုပေး၏, နှင့်သခင်မပယ်ရှားခဲ့သည်. ထိုသို့သခင်ဘုရားသည်အလိုတော်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်ပြုဘူးခဲ့. မင်္ဂလာရှိသခင်၏နာမတော်ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
1:22 ဤအမှုအလုံးစုံအတွက်, ယောဘသည်သူ၏နှုတ်ခမ်းများကပြစ်မှားဘဲ, မဟုတ်သူသညျဘုရားသခငျဆန့်ကျင်မည်သည့်မိုက်မဲသောအရာပွောဆိုခဲ့ပါ.
2:1 သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်, တယောကျနေ့တှငျ, when the sons of God had arrived and they stood before the Lord, Satan likewise arrived among them, and he stood in his sight.
2:2 So the Lord said to Satan, "သင်ဘယ်ကလာသလဲ?"ဖြေဆိုခြင်း, ဟုသူကပြောသည်, "ငါသည်ထိုပြည်၌လှည့်ပတ်ကြပြီ, ထိုသို့ခန့်သွားလာ၏။ "
2:3 And the Lord said to Satan, "သင်ငါ့ကျွန်စဉ်းစားမရဖူး, အလုပ်, that there is no one like him in the land, ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ရိုးသားသောလူကို, fearing God and withdrawing from evil, and still retaining his innocence? Yet you have stirred me against him, so that I would afflict him to no purpose.”
2:4 သူ့ကိုဖြေဆိုခြင်း, စာတနျသကပြောပါတယ်, “Skin for skin; and everything thataman has, he will give for his life.
2:6 ထို့ကြောင့်, သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုစာတန်ကပြောပါတယ်, "အကယ်, he is in your hand, but even so, spare his life.”
2:7 ဆိုတော့, Satan departed from the face of the Lord and he struck Job withavery serious ulcer from the sole of the foot all the way to the crown of his head.
2:11 ဆိုတော့, three friends of Job, hearing about all the evil that had befallen him, ရောက်ရှိ, each one from his own place, Eliphaz the Themanite, and Baldad the Suhite, and Zophar the Naamathite. For they had agreed to come together to visit and console him.
2:12 And when they had raised up their eyes fromadistance, they did not recognize him, နှင့်, အော်ဟစ်, they wept, နှင့်, tearing their garments, they scattered dust over their heads into the sky.
3:1 ထိုနောက်မှ, ယောဘသည်မိမိနှုတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မိမိနေ့ကိုကျိန်ဆဲ,
3:3 ငါမွေးဖွားခဲ့သည့်နေ့သည်ဆုံးရှုံး May, နှင့်ညဉ့်, သောကပြောသည်ခဲ့သည်, "လူသည်ပဋိသန္ဓေသိရသည်။ "
3:11 အဘယ်ကြောင့်ငါအမိဝမ်း၌သေဘူး? အမိဝမ်းထဲကျန်ရစ်ဘဲလျက်, အဘယ်ကြောင့်ငါချက်ချင်းမပျက်စီးဘဲ?
3:12 အဘယ်ကြောင့်ငါဒူးပျေါမှာလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်? အဘယ်ကြောင့်ငါရင်ပတ်မှာ suckled ခဲ့သည်?
3:13 ယခုသောအားဖြင့်, ငါတိတ်တဆိတ်အိပျပျြောခဲ့ကြသင့်တယ်, နှင့်ငါ့အိပ်ထဲမှာကြွင်းသောအရာယူပြီး
3:14 မြေကြီးတပြင်ရှငျဘုရငျတို့နှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးနှင့်အတူ, မိမိတို့ကိုယ်ကိုအထီးထီးနေခြင်းတည်ဆောက်တဲ့သူ,
3:15 မှူးမတ်များနှင့်လည်းကောင်း, ရွှေကိုအပိုင်, ငွေနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိမ်များကိုဖြည့်တဲ့သူ,
3:16 သို့မဟုတ်, လြှို့ဝှကျကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတူ, ငါဆက်မနေသင့်, ရုံသောသူကဲ့သို့, ပဋိသန္ဓေ ယူ. ဖြစ်ခြင်း, အလင်းကိုမြင်ရပြီမဟုတ်.
3:17 အဲဒီမှာပုန်ကန်မှုအနေဖြင့်မတရားသောသူတို့အတွက်အပစ်အခတ်, နှင့်အစွမ်းသတ္တိရှိပင်ပန်းလှပြီအရာကြွင်းလေယူ.
3:20 အဘယ်ကြောင့်အလင်းစိတ်ဆင်းရဲပေး, နှင့်အသက်ဝိညာဉ်ခါးသီးမှု၌နေသောသူတို့အား,
3:21 သေဆုံးမျှော်လင့်ထားသူအ, ထိုသို့ရောက်လာမပါဘူး, ဘဏ္ဍာသည်အဘို့အတူးသောသူကဲ့သို့
4:1 But Eliphaz the Themanite, answering, ကပြောပါတယ်:
4:3 အကယ်, you have taught many, and you have strengthened weary hands.
4:7 ဒီစဉ်းစားကြည့်ပါ, တောင်းပန်ပါတယ်: who ever perished being innocent? Or when have the righteous been destroyed?
4:8 တကယ်တော့, I have instead seen those who work iniquity and who sow resentments, reap them,
4:12 ထို့အပွငျ,aword was spoken to me in secret, နှင့်, as if by theft, my ears received the pulse of its whisper.
4:18 အကယ်, those who serve him are not steadfast, and in his angels he finds imperfection.
5:2 အမှန်ဆိုသည်ကား,, anger condemns the foolish to death, and envy kills the petty.
5:8 ထို့ကြောင့်, ဒီအတွက်ကြောင့်, I will beg the Lord, and place my eloquence before God.
5:15 ထို့နောကျ, he will act to save the needy from the sword of their mouth, and the poor from the hand of the violent.
5:17 Blessed is the man whom God corrects; ထိုကွောငျ့, do not reject the chastisement of the Lord.
5:24 And you will know that your home has peace, နှင့်, concerning your appearance, သငျသညျပွစျမှားမည်မဟုတ်.
5:25 အလားတူပဲ, you will know that your offspring will be manifold and your progeny will be like the grass of the earth.
5:27 အကယ်, this is just as we have found it, which you have heard; walk it through your mind.
6:1 But Job, ကိုတုံ့ပြန်, ကပြောပါတယ်:
6:7 The things that my soul was unwilling to touch before, ယခု, because of anguish, are my foods.
6:9 and that he who, အစဦးတွင်, had crushed me, will let loose his hand and cut me down?
6:13 အကယ်, there is no help for me in myself, and my loved ones also have withdrawn from me.
6:17 ထိုအချိန်မှာ, when they are scattered, သူတို့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟု, and when it becomes hot, they will be freed from their place.
6:23 သို့မဟုတ်, “Free me from the hand of the enemy and rescue me from the hand of the strong?"
6:28 Such is true, so finish what you have begun. နီးနီးကပ်ကပ် Listen, and see if I lie.
6:29 Respond, တောင်းပန်ပါတယ်, without contention, နှင့်, speaking what is just, pass judgment.
7:11 ထိုအကြောင်းကြောင့်ဤအမှု, I will not restrain my mouth. I will speak in the affliction of my spirit. I will converse from the bitterness of my soul.
7:15 သောကြောင့်, ထိုအမှုကြောင့်, my soul would choose hanging, and my bones, death.
7:17 လူသည်အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသည်, that you should praise him? Or why do you place your heart near him?
7:21 Why do you not steal away my sin, and why do you not sweep away my iniquity? အကယ်, now I will sleep in the dust, and if you seek me in the morning, I will not remain.
8:1 But Baldad the Suhite, ကိုတုံ့ပြန်, ကပြောပါတယ်:
8:5 သော်ငြားလည်း, you should arise early to God, so as to beseech the Almighty.
8:7 ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်, if your former things were small, your latter things would be multiplied greatly.
8:9 (ဒါပေါ့, we are but of yesterday and are ignorant that our days on earth are likeashadow,)
9:1 ထိုအခါယောဘသည်, ကိုတုံ့ပြန်, ကပြောပါတယ်:
9:2 အမှန်ဆိုသည်ကား,, ငါကဒါကြောင်းသိ, ထိုလူသည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြစ်နှင့်လွတ်မရနိုငျ.
9:3 သူ့ကိုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, သူတစျထောငျအဆထဲကတစ်ချိန်ကသူ့ကိုတုံ့ပြန်နိုင်မဖြစ်.
9:4 သူဟာခွန်အား၌နှလုံးနှင့်အားကြီးသောဥာဏ်သည်; အဘယ်သူသည်သူ့ကိုခုခံသော်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိခဲ့ပါတယ်?
9:5 သူကတောင်များပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, သူသည်မိမိအမျက် ထွက်. မှောက်လှန်တော်မူသောသောသူတို့အားမသိ.
9:7 သူသည်နေပူပညတ်တော်မူ၏နှင့်ကမထပါဘူး, သူကတံဆိပ်အောက်မှာလျှင်အဖြစ်ကြယ်ပိတ်ထားရ.
9:8 တယောက်တည်းသူဟာမိုဃ်းကောင်းကင်ကိုသက်တမ်းတိုး, သူသည်သမုဒ္ဒရာလှိုင်းတံပိုးများပေါ်မှာသွားလာ.
9:9 သူကဖက်ရှင်တွေ Arcturus, နှင့် Orion, နှင့် Hyades, နှင့်တောင်ဘက်၏အတွင်းပိုင်း.
9:10 သူကကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်နားမလည်ခြင်းနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုအရာစုံ, သောရေတွက်မရနိုငျ.
9:11 သူသည်ငါ့ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့လျှင်, သူ့ကိုငါကြည့်ရှုမည်မဟုတ်; သူထွက်ခွာလျှင်, ငါနားလည်မည်မဟုတ်.
9:12 သူရုတ်တရက်မေးခွန်းထုတ်သင့်တယ်လိုလျှင်, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုပြန်ပြောမည်? သို့မဟုတ်အဘယ်သူဆိုနိုင်, "အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလုပျဆောငျခဲ့?"
9:13 ဘုရားသခ, whose wrath no one is able to resist, and under whom they bend who carry the world,
9:14 ငါထို့နောက်အဘယျသို့ဖွစျပါ၏, သူ့ကိုငါနှင့်အတူသူနှင့်လဲလှယ်စကားကိုပြန်ပြောရမည်အကြောင်း?
9:15 ထိုအခါငါယခုအခါဘယ်တရားမျှတမှုရှိပါက, ငါမတုံ့ပွနျလိမျ့မညျ, ဒါပေမယ့်ငါ့တရားသူကြီးတောင်းပန်သွေးဆောင်ပါ၏လိမ့်မည်.
9:16 ထိုအခါငါချေါသောအခါသူသည်ငါ့ကိုစကားကိုနားထောငျသငျ့သညျလျှင်, ငါကသူငါ့စကားသံကိုကြားသိခဲ့ကွောငျးမယုံနိုင်.
9:29 သို့သျောလညျး, if I am also just as impious, why have I labored in vain?
10:2 ငါသည်ဘုရားသခင်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာဦးမည်: Do not be willing to condemn me. Reveal to me why you judge me this way.
10:4 Do you have bodily eyes? သို့မဟုတ်, just as man sees, will you see?
10:8 Your hands have made me and formed me all around, နှင့်, ဒီလိုမျိုး, do you suddenly throw me away?
10:9 သတိရ, ကျွန်တော်သင့်ကိုမေးမယ်, that you have fashioned me like clay, and you will reduce me to dust.
10:15 And if I should be impious, ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိ၏, and if I should be just, I will not lift up my head, being drenched with affliction and misery.
10:20 Will not my few days be completed soon? ငါ့ကိုလွှတ်ပေးရန်, ထိုကွောငျ့, so that I may lament my sorrowsalittle,
11:1 But Zophar the Naamathite, ကိုတုံ့ပြန်, ကပြောပါတယ်:
11:16 Misery, ထိုနည်းတူ, you would forget, or would remember only like waters that have passed by.
11:18 နှင့်, when hope has been set before you, you will have faith, နှင့်, when buried, you will sleep secure.
12:1 ထိုအခါယောဘ, answering, ကပြောပါတယ်:
12:2 Are you, ထိုကွောငျ့, alone among men, and will wisdom die with you?
12:7 အမှန်တရားမှာ, ask the mules, and they will teach you, and the birds of the sky, and they will reveal to you.
12:23 He multiplies peoples, and destroys them, နှင့်, having been overthrown, he restores them anew.
13:1 အကယ်, my eye has seen all these things, and my ear has heard, and I have understood each one.
13:6 ထို့ကြောင့်, listen to my correction, and pay attention to the judgment of my lips.
13:9 သို့မဟုတ်, will it please him, from whom nothing can be concealed? သို့မဟုတ်, will he be deceived, likeaman, by your deceitfulness?
13:15 နှင့်ယခု, if he would kill me, သူ့ကိုငါမြော်လင့်လိမ့်မယ်; ဤသည်၌, အမှန်တကယ်, I will correct my ways in his sight.
14:1 က Man, born of woman, living forashort time, is filled with many miseries.
14:10 အမှန်ဆိုသည်ကား,, whenaman dies, and has been left unprotected, and has decayed, I ask you where is he?
14:16 တကယ်ပါပဲ, you have numbered my steps, but you have been lenient with my sins.
14:19 Waters wear away stones, and withaflood the land is reduced little by little; နှင့်အလားတူ, you will destroy man.
15:1 But Eliphaz the Themanite, answering, ကပြောပါတယ်:
15:15 အကယ်, among his holy ones not one is immutable, and even the heavens are not pure in his sight.
15:17 ငါသည်သင်တို့ကိုမှထုတ်ဖေါ်ပါလိမ့်မယ်, so listen to me; and I will explain to you what I have seen.
16:1 ထိုအခါယောဘ, answering, ကပြောပါတယ်:
16:4 ငါ, လွန်း, can speak like you; and I also wish that your soul favored my soul.
16:10 He has gathered together his fury towards me, နှင့်, threatening me, he has roared against me with his teeth; my enemy has beheld me with terrible eyes.
16:11 They have opened their mouths against me, နှင့်, reproaching me, they have struck me on the cheek; they are nourished by my sufferings.
16:13 ငါ, who once was wealthy, am now crushed. He has grabbed me by my neck; he has broken me and has place me before him asasign.
16:19 အိုမြေကြီး, do not conceal my blood, nor let my outcry findahiding place in you.
16:20 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, my witness is in heaven, and my confidante is on high.
16:23 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်,afew years pass by, and I am walkingapath by which I will not return.
17:3 ငါ့ကိုလွတ်မြောက်, အိုထာဝရဘုရား, and set me beside you, and let the hand of anyone you wish fight against me.
17:4 You have set their heart far from discipline; ထိုကွောငျ့, they will not be praised.
17:10 ထို့ကြောင့်, be converted, မင်းတု့အားလုံး, နှင့်ချဉ်းကပ်နည်း, for I do not find in you any wisdom.
17:14 I have said to decay and to worms: "သင်ငါ့ခမည်းတော်များမှာ, ကိုယ့်အမေ, and my sister.”
17:15 ထို့ကြောင့်, where is my expectation now, and who is it that considers my patience?
18:4 သငျသညျ, who ruins your own soul in your fury, will the earth be forsaken because of you, and will the cliffs be moved from their place?
18:21 ဆိုတော့, these are the tabernacles of the sinful, and this the place of he who does not know God.
19:3 ဒါကြောင့်, ten times you confound me and are not ashamed to oppress me.
19:4 အခုတော့, ဒါပေါ့, if I have been ignorant, my ignorance will be with me.
19:7 အကယ်, ငါအော်ဟစ်ပါလိမ့်မယ်, enduring violence, and no one will hear. I will announce loudly, but there is no one who may judge.
19:10 He has destroyed me on every side, and I am lost, နှင့်, like an uprooted tree, he has taken away my hope.
19:18 Even the foolish have looked down on me, နှင့်, when I withdrew from them, they spoke ill of me.
19:21 အကြှနျုပျကိုသနားတျောမူပါ, အကြှနျုပျကိုသနားတျော, အနည်းဆုံးအားသင်သည်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကို, သခင်ဘုရား၏လက်တော်မှငါ့ကိုထိခိုက်ကြောင့်.
19:22 အဘယ်ကြောင့်သင်သည်ဘုရားသခင်၏မယ့်အဖြစ်ငါ့ကိုမှီအောင်လိုက်ကြပါ, ငါ့အသားနှင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဝစှာကြှေး?
19:23 အဘယ်သူသည်ငါ့စကားရေးမှတ်စေခြင်းငှါငါ့ထံသို့ပေးသနားတော်မူပါလိမ့်မယ်? အဘယ်သူသည်သူတို့တစ်တွေစာအုပ်ထဲတွင်ရေးထိုးစေခြင်းငှါငါ့ထံသို့ပေးသနားတော်မူပါလိမ့်မယ်,
19:24 သံကလောင်နှင့်ခဲတစ်ပန်းကန်နှင့်အတူ, ကျောက်သို့မဟုတ်အခြားထွင်းခံရ?
19:25 အဘို့ငါသည်ငါ့ကိုရွေးနှုတ်သောဘဝတွေကိုသင်သိရ, နှင့်နောက်ဆုံးနေ့တွင်ငါသည်မြေကြီးထဲကထမြောက်ကြလိမ့်မည်.
19:26 ငါ့အရေနှင့်နောက်တဖန်လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်, နှင့်ငါ့ဇာတိပကတိ၌ငါသည်ငါ၏ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
19:27 ဒါဟာငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ဘယ်သူကိုသူသည်, သူသည်လည်းငါ၏မျက်စိကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူကို, နှင့်မျှမကအခြား. ဤ, ငါမြော်လင့်, ကြှနျတေျာ့ရငျခှငျ၌ကြွင်းသောအရာကိုယူထားပါတယ်.
19:29 သို့ဖြစ်., flee from the face of the sword, for the sword is the avenger of iniquities; but know this: there is to beajudgment.
20:2 တုန့်ပြန်, various thoughts succeed one another in me, and my mind moves quickly through different ideas.
20:3 The teaching you use to admonish me, ငါနားထောင်မည်, and the spirit of my understanding will respond for me.
20:4 ဤ, ငါသိတယ်, is from the beginning, from the time that man was set over the earth:
20:7 အဆုံးသတ်မှာ, he will be destroyed likeatrash heap, and those who had seen him will say: “Where is he?"
20:12 အကြောင်းမူကား,, when evil will be sweet in his mouth, he will hide it under his tongue.
20:19 အကြောင်းမူကား,, having broken in, he stripped the poor. He has quickly stolen awayahouse he did not build.
20:21 Nothing remained of his portion, နှင့်, ဒီအတွက်ကြောင့်, nothing will continue of his kind.
21:3 ငါ့ကိုခွင့်, ငါပြောမည်, and afterwards, if you see fit, you can laugh at my words.
21:6 ငါ့အဘို့အဖြစ်, when I think it over, I am afraid, and trembling convulses my body.
21:19 God will preserve the grief of the father for his sons, နှင့်, when he repays, then he will understand.
21:25 အမှန်တရားမှာ, another dies in bitterness of soul, without any resources.
21:27 အကယ်စင်စစ်, I know your thoughts and your sinful judgments against me.
21:34 ထို့ကြောင့်, how long will you console me in vain, when your answer is shown to be repugnant to truth?
22:10 ဒီအတွက်ကြောင့်, you are surrounded by traps, and unexpected fears will disturb you.
22:13 တဖန်သင်တို့ဆိုရ: "ကောင်းပြီ, what does God know?"နှင့်, “He judges, as if throughafog,"
22:14 နှင့်, “The clouds are his hiding-place,"နှင့်, “He does not examine us closely,"နှင့်, “He makes his rounds at the limits of the heavens.”
22:21 ဒါကြောင့်, repose yourself with him and be at peace, နှင့်, ဒီလိုမျိုး, you will have the best fruits.
23:9 If I turn to the left, what can I do? I will not take hold of him. If I turn myself to the right, သူ့ကိုငါကြည့်ရှုမည်မဟုတ်.
23:10 အမှန်ဆိုသည်ကား,, he knows my way and has tested me like gold that passes through fire.
23:15 နှင့်, ဒီအတွက်ကြောင့်, I have been troubled at his presence, နှင့်, when I consider him, I am approached by fear.
24:8 these are wet with the mountain rain, နှင့်, having no covering, they embrace the rocks.
24:14 The killer of men rises at first light; he executes the destitute and the poor, ဒါပေမဲ့, အမှန်တရားအတွက်, he is likeathief in the night.
24:15 The eye of the adulterer waits for darkness, ဟုဆို, “No eye will see me,” and he covers his face.
24:22 He has pulled down the strong by his strength, နှင့်, when he stands up, he will not have trust in his life.
24:24 They are lifted up foralittle while, but they will not continue, and they will be brought low, just like all things, and they will be taken away, နှင့်, like the tops of the ears of grain, they will be crushed.
24:25 ဒါပေမယ့်, if this is not so, who is able to prove to me that I have lied and to place my words before God?
25:5 အကယ်, even the moon is not radiant, and the stars are not pure, in his sight.
26:5 အကယ်, giant things groan under the waters, and they dwell with them.
26:14 အကယ်, these things have been said about his ways in part, နှင့်, since we barely have heardasmall drop of his word, who will be able to gaze upon the thunder of his greatness?
27:1 Job also added to this, using figures of speech, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်:
27:5 Far be it from me that I should judge you to be right, အဘို့, until I expire, I will not withdraw from my innocence.
27:12 အကယ်, you know all this, and so why do you speak vain things withoutareason?
27:21 A burning wind will pick him up and carry him away, နှင့်, likeawhirlwind, it will rush him from his place.
28:5 ထိုပြည်၌, where bread appeared in its place, has been destroyed by fire.
28:6 Its stones are embedded with sapphires, and its soil, ရွှေနှင့်.
28:12 ဒါပေမယ့်, အမှန်တရားအတွက်, where is wisdom to be found, and where is the place of understanding?
28:20 သို့ဖြစ်., where does wisdom begin, and where is the place of understanding?
28:26 ထိုအချိန်မှာ, he gavealaw to the rain andapath to the resounding storms.
29:1 Job also added to this, using figures of speech, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်:
29:3 ထိုအချိန်မှာ, his lamp shined over my head, and by his light, I walked through the darkness.
29:5 ထိုအချိန်မှာ, the Almighty was with me and my children surrounded me.
29:6 ထိုအခါ, I washed my feet with butter, andaboulder poured out rivers of oil for me.
29:8 The youths saw me and hid themselves, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့, မြင့်တက်တက်, remained standing.
29:18 ထိုအခါငါကပြောသည်, “I will die in my little nest, and likeapalm tree, I will multiply my days.
29:25 If I wished to go to them, I sat down first, နှင့်, though I sat likeaking surrounded by an army, yet I wasacomforter to whose who mourned.
30:1 ယခုမူကား, those younger in years scorn me, whose fathers I would not have seen fit to place with the dogs of my flock,
30:12 ချက်ချင်း, upon rising, my calamities rise up to the right. They have overturned my feet and have pressed me down along their way like waves.
30:15 ကျွန်မဘာမျှမလျှော့ချခဲ့ကြ. You have taken away my desire likeawind, and my health has passed by likeacloud.
30:21 You have changed me into hardness, နှင့်, with the hardness of your hand, you oppose me.
30:22 You have lifted me up, နှင့်, placing me as if on the wind, you have thrown me down powerfully.
30:24 အမှန်ဆိုသည်ကား,, ထို့နောက်, you do not extend your hand in order to consume them, and if they fall down, you will save them.
30:28 I went forth mourning, without anger, နှင့်ထ, I cried out in confusion.
31:14 then what will I do when God rises to judge, နှင့်, when he inquires, how will I respond to him?
31:24 If I have considered gold to be my strength, or if I have called purified gold ‘my Trust;''
31:33 လျှင်, as man does, I have hidden my sin and have concealed my iniquity in my bosom;
31:35 ထို့နောက်, would he grant meahearing, so that the Almighty would listen to my desire, and he who judges would himself writeabook,
31:38 ဒါကြောင့်, if my land cries out against me, and if its furrows weep with it,
31:40 ထို့နောက်, may thistles spring forth for me instead of grain, and thorns instead of barley. (This ended the words of Job.)
32:3 ထို့အပြင်, he was indignant with his friends because they had not foundareasonable response, except in so far as they condemned Job.
32:4 ထို့ကြောင့်, Eliu waited while Job was talking, for these were his elders that were speaking.
32:6 And so Eliu the son of Barachel the Buzite responded by saying: I am younger in years, and you are more ancient; ထိုကွောငျ့, I kept my head low, for I was afraid to reveal to you my opinion.
32:10 ထို့ကြောင့်, I will speak. ငါပြောတာနားထောင်ပါ, and so I will show you my wisdom.
32:12 And as long as I supposed that you were saying something, ကျွန်မစဉ်းစား; but now I see that there is none of you that is able to argue with Job and to respond to his words.
32:16 ထို့ကြောင့်, because I have waited and they have not been speaking, for they stood firm and did not respond at all,
32:19 ဟုတ်ကဲ့, my stomach is like fermenting wine withoutavent, which bursts the new containers.
33:1 ထို့ကြောင့်, hear my speeches, အလုပ်, and listen to all my words.
33:2 အကယ်, I have opened my mouth; let my tongue speak along with my throat.
33:6 အကယ်, God has made me, just as he also has made you, ငါ, ထိုနည်းတူ, have been formed of the same clay.
33:7 ဒါကြောင့်, အမှန်တကယ်, do not let my wonders terrify you, and do not let my eloquence be burdensome to you.
33:8 For you have spoken in my hearing, and I have heard the voice of your words, ဟုဆို:
33:12 ထို့ကြောင့်, it is for this reason that you have not been justified. For I tell you that God is greater than man.
33:16 ထို့နောက်, he opens the ears of men, နှင့်, educating them, he teaches discipline,
33:19 အလားတူပဲ, he rebukes by sorrow in bed, and he causes all of his bones to become weak.
33:20 Bread becomes abominable to him in his life, နှင့်, to his soul, the meat which before he desired.
33:24 he will have mercy on him, သူကပြောပါလိမ့်မယ်, “Free him, so that he will not descend to destruction. I have foundareason to be favorable to him.
33:27 He will consider mankind, သူကပြောပါလိမ့်မယ်: “I have sinned and truly I have offended, yet I was not treated as I deserved.”
33:28 He has freed his soul from continuing into destruction, သောကြောင့်, လူနေမှုအတွက်, it may see the light.
33:29 အကယ်, all these things God works three times within each one,
33:31 Pay attention Job, ငါ့ကိုနားထောင်ရန်; and remain silent, while I speak.
33:32 သို့သျောလညျး, if you have anything to say, answer me and speak, for I want you to be treated justly.
34:6 အကြောင်းမူကား,, within my judgment, there isalie: my vehement barbs are without any sin.”
34:9 ဟုသူကပြောသည်ပြီ, “Man will not please God, even if he should travel with him.”
34:10 ထို့ကြောင့်, prudent men, ငါ့စကားကိုနားထောင်: impiety is far from God, and iniquity is far from the Almighty.
34:12 အကယ်စင်စစ်, God will not condemn in vain, nor will the Almighty repudiate judgment.
34:14 ဒါပေမယ့်, if he directs his heart towards him, he will draw his spirit and breath to himself.
34:16 ထို့ကြောင့်, if you have understanding, hear what is said, and heed the sound of my eloquence.
34:25 For he knows their works, နှင့်, ရလဒ်အနေနှင့်, he will bring the night, and they will be crushed.
34:27 သူတို့, as if with great diligence, have withdrawn from him, and they refused to understand all his ways,
34:29 အကြောင်းမူကား,, when he grants peace, who is there that can condemn? When he hides his face, who is there that can contemplate him, either among the nations, or among all men?
34:31 ထို့ကြောင့်, since I have been speaking about God, I will not prevent you from doing the same.
34:33 Does God require this of you because it is displeasing to you? For you were the first to speak, and not I. But if you know something better, ပွောဆို.
34:37 For he adds blasphemy on top of his sins; သို့ရာတွင်, let him be constrained to be among us, and then let him provoke God to judgment with his speeches.
35:1 ထိုနောက်မှ, Eliu again spoke in this way:
35:3 For you said, “Having done what is right does not please you,"နှင့်, “How will it benefit you, if I sin?"
35:4 ဆိုတော့, I will respond to your words, and to your friends who are with you.
35:5 Look up towards heaven and consider; လည်း, think about the sky, which is higher than you.
35:7 ထို့အပွငျ, if you act justly, what will you give him, or what will he receive from your hand?
35:13 ထို့ကြောင့်, God does not hear in vain, and the Almighty will look into each and every case.
35:14 ဆိုတော့, when you say, “He does not examine,” be judged before him, but wait for him.
35:15 အကြောင်းမူကား,, at the present time, he does not bring forth his fury, nor does he punish sin exceedingly.
35:16 ထို့ကြောင့်, Job has opened his mouth in vain and has multiplied words without knowledge.
36:8 နှင့်, if they are in captivity, or are bound with the chains of poverty,
36:10 အလားတူပဲ, he will open their ears to his correction, and he will speak to them, so that they may return from iniquity.
36:12 ဒါပေမဲ့သူတို့ကနားမထောင်ဘဲနေလျှင်, they will pass away by the sword and will be consumed by foolishness.
36:16 ထို့ကြောင့်, he will save you from the narrow mouth very widely, even though it has no foundation under it. ထို့အပြင်, your respite at table will be full of fatness.
36:18 ထို့ကြောင့်, do not let anger overwhelm you so that you oppress another; neither should you allowamultitude of gifts to influence you.
36:21 Be careful that you do not turn to iniquity; အဘို့, after your misery, you have begun to follow this.
36:22 အကယ်, God is exalted in his strength, and there is no one like him among the law-givers.
36:26 အကယ်, God is great, defeating our knowledge; the number of his years is inestimable.
36:30 and shines with his light from above; ထိုနည်းတူ, he covers the oceans within his tent.
37:4 ထိုနောက်မှ,anoise will sound; he will thunder with the voice of his greatness, and it will not be tracked down, yet his voice will be obeyed.
37:14 ဤအမှုအရာတို့ကိုနားထောင်ပါ, အလုပ်. Stand up and consider the wonders of God.
37:19 Reveal to us what we should say to him, အဘို့, ဒါပေါ့, we are wrapped in darkness.
37:24 ထို့ကြောင့်, men will fear him, and all those who seem to themselves to be wise, will not dare to contemplate him.
38:1 သို့သော်လည်းသခင်ဘုရား, လေဘွေမှယောဘအားတုံ့ပြန်, ကပြောပါတယ်:
38:4 Where were you, when I set the foundations of the earth? ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ, if you have understanding.
38:11 ထိုအခါငါကပြောသည်: “This far you will approach, and you will proceeded no further, and here you will break your swelling waves.”
38:12 သငျသညျပွုခဲ့, သင့်ရဲ့ဖွားမြင်ပြီးနောက်, နေရောင်၏မွေးဖွားခြင်းငှါငါပညတ်နှင့်နေထွက်သည်၎င်း၏အရပ်ဌာနကိုပြသ?
38:13 သင်သည်ထိုမြေ၏စှကိုင်ခဲ့, သူတို့ကိုတုန်လှုပ်, သင်ကထဲကမတရားသောသူတို့အတွက်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြပြီ?
38:14 အဆိုပါတံဆိပျကိုရွှံ့နဲ့တူပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျ, ထိုသို့အဝတ်ကဲ့သို့အရပ်ဌာန၌တည်နေကြလိမ့်မည်.
38:15 ထိုမတရားသောသူတို့အတွက်ကနေ, အလင်းကိုသိမ်းသွားလိမ့်မည်, နှင့်ချီးမြှောက်သောလက်ရုံးတော်ကိုကျိုးပဲ့ပျက်စီးရလိမ့်မည်.
38:16 သင်နဲသောပငျလယျထဲသို့ဝငျဖူး, သင်အနက်ဆုံးသောတွင်း၏စွန်းတစ်လမ်းလျှောက်ယူကြပြီ?
38:17 သေခြင်းတံခါးတို့ကိုသင့်အားဖွင့်လှစ်ပြီ, သငျတို့သညျမှောငျမိုကျတံခါးတို့ကိုမြင်ကြပြီ?
38:18 သငျသညျမွကွေီး၏အနံကိုဆင်ခြင်ပြီ? သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုသိလိုလျှင်, ငါ့ကိုအဖို့သူတို့ကိုထုတ်ဖေါ်.
38:19 အလင်းကိုရရှိထားသူသောလမ်းဘယ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အရာသည်မှောင်မိုက်၏အရပျဖြစ်ပါသည်?
38:20 ဒီလိုမျိုး, သငျသညျက၎င်း၏နောက်ဆုံးအရပ်မှအသီးအသီးအရာဦးတည်စေခြင်းငှါ,, နှင့်၎င်း၏အိမ်၏လမ်းခရီးနားလည်.
38:21 သို့ဖြစ်., သငျသညျမှေးဖှားခံရဖို့သောအခါသင်သိခဲ့ပါ? ထိုအခါသင်သည်သင်၏ကာလ၏အရေအတွက်ကိုသိခဲ့ပါ?
38:32 Can you bring forth the morning star, ၎င်း၏ကာလ၌, and make the evening star rise over the sons of the earth?
38:35 Can you send forth lightning bolts, and will they go, and on returning, သငျသညျဆိုသညျကား: “Here we are?"
39:18 သို့သျောလညျး, when the time is right, she raises her wings on high; she ridicules the horse and his rider.
39:25 When he hears the bugle, သူကပြောပါတယ်, “Ha!” He smells the battle fromadistance, the exhortation of the officers, and the battle cry of the soldiers.
39:29 ထိုအရပ်မှ, she looks for food, and her eyes catch sight of it from far away.
39:31 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဆက်လက်, and he said to Job:
39:32 Will he who contends with God be so easily silenced? မုချ, he who argues with God must also respond to him.
39:33 Then Job answered the Lord, ဟုဆို:
40:1 သို့သော်လည်းသခင်ဘုရား, answering Job out of the whirlwind, ကပြောပါတယ်:
40:3 သငျသညျအကြှနျုပျ၏တရားစီရင်ခြင်းကိုပျက်ပြယ်စေမည်; သငျသညျအပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းငှါဤမျှနှင့်ငျသညျငါ့ကိုတရားရှုံးစေမည်?
40:4 တဖန်သင်တို့ဘုရားသခင်ကဲ့သို့တစ်ဦးလက်မောင်းကိုမ, သို့မဟုတ်ချုန်းအသံကဲ့သို့သောအသံ?
40:5 ဂုဏ်အသရေနှင့်ကိုယ်ကိုစာအိတ်, မြင့်သောကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ပေါ်ထွန်းစေ, နှင့်ဘုန်းပွင့်ဖြစ်, နှင့်ကြက်သရေအဝတ်ကိုဝတ်ပြီးမှ.
40:6 Scatter the arrogant with your wrath, နှင့်, when you see all the arrogant, humble them.
40:10 အကယ်, the behemoth, whom I created along with you, eats hay like an ox.
40:18 အကယ်, he will drinkariver and not be amazed, and he has confidence that the Jordan could flow into his mouth.
40:28 အကယ်, his hope will fail him, and in the sight of all, he will be thrown down.
41:16 When he will be raised up, the angels will be afraid, နှင့်, because they are terrified, they will purify themselves.
42:1 ထိုအခါယောဘ, ထာဝရဘုရားအားတုံ့ပြန်, ကပြောပါတယ်:
42:2 ငါသည်သင်တို့ကိုခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြုပါနိုင်ကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏, မရှိအတှေးအသင်တို့ထံကဝှက်ထားလျက်ရှိသော.
42:3 ဒါကြောင့်, အကွံဉာဏျအဖြစ်အသိပညာတစ်ခုမရှိခြင်းဖုံးကွယ်မယ်လို့သူကဘယ်သူလဲ? ထို့ကြောင့်, ငါမိုက်စကားပြောခဲ့ကြ, အဘယ်သူ၏အတိုင်းအတာငါ့ပညာအတတ်ထက်ကျော်လွန်သောအရာတို့ကိုအကြောင်းကို.
42:4 နားထောင်, ငါပြောမည်. I will question you, and you may answer me.
42:5 နားနှင့်အတူအာရုံကိုပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်, ငါသည်သင်တို့ကြားရကြပြီ, ယခုမူကားငါ၏အမျက်စိသင်ရှုမြင်.
42:6 ထို့ကြောင့်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဆိုဖှယျတှေ့ရှိ, ငါမီးတောက်ပြာ၌ penance ပွုပါမညျ.
42:8 ထို့ကြောင့်, have seven bulls and seven rams brought to you, and go to my servant Job, and offer these asaholocaust for yourselves. ဒါပေမယ့်လည်း, my servant Job will pray for you; I will accept his face, so that foolishness will not be imputed to you. For you have not been speaking correctly about me, as my servant Job has done.
42:10 အလားတူပဲ, the Lord was moved by the repentance of Job, when he prayed for his friends. And the Lord gave to Job twice as much as he had before.
42:12 ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်မိမိအစအဦးထက် ပို. ပင်ယောဘ၏နောက်ဆုံး၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ. ထိုမင်းသည်တိုင်အောင်တဆယ်လေးတထောင်သိုးခဲ့, ခွောကျထောငျကုလားအုပျ, နွားနှင့်တထောင်အားလုံး, နှင့်တထောင်သူမက-မြည်း.
42:14 ထိုမင်းသည်တဦးတည်း၏အမည်ကိုဟုခေါ်တွင်, မိုဃ်းလင်း, ဒုတိယနှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု., သစ်ကြမ်းပိုး, တတိယနှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု., အလှကုန်၏ဦးချိုကို.
42:15 နှင့်, လောကဓာတ်လုံးကိုအတွက်, အဲဒီမှာကယောဘ၏သမီးအဖြစ်အမျိုးသမီးအရမ်းလှတယ်မတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်. ဒီတော့သူတို့အဖေကသူတို့ကိုသူတို့ညီအစ်ကိုများနှင့်အတူအမွေကိုပေးတော်မူ၏.
42:16 သို့သော်ယောဘသည်ရှည်လျားသည်ဤဖြစ်ရပ်များအပြီးနေထိုင်ခဲ့, တစ်ရာ့လေးဆယ်နှစ်ပေါင်း, မိမိသားသမီးများကိုမြင်လျှင်, နှင့်သူ၏သားသမီးရဲ့ကလေးများ, စတုတ္ထမျိုးဆက်မှအပေါင်းတို့သည်လမ်း, သူတစ်ဦးလူဟောင်းကိုအသေခံခြင်းနှင့်ကာလပြည့်စုံရာ.